SIFOOYINKA EE SII KORDHAYA RUDBECKIA PERENNIAL, TALO KHABIIR - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Rudbeckia Dugsi-daa'in: sifooyinka daryeelka
Rennbeckia Perennial waa geedka quruxda badan ee cadowga Astrov. Wuxuu ka yimid Waqooyiga Ameerika. Cunto noocan oo kale ah waxay noqon doontaa mid aad u fiican ee sariirta ubax kasta, iyo xitaa asal ah ee floriculture waxay u hogaansami kartaa xeerarka daryeelka.
Ma taqaanaa? Rudbeckia ayaa magaceeda ku sharraxday botanistayaasha ka soo jeeda Iswiidhan, Olof Rudbek (oo helay nidaamka nidaamka lenfiga) iyo aabihiis. Waxay sidoo kale yihiin awowayaashii Alfred Nobel.
Noocyada Rudbeckia dilka ah
Wadar ahaan waxaa jira ilaa 300 nooc oo dhirtaas ah, mid waliba waa mid soo jiidasho leh, laakiin waxaa jira dhowr ah oo badanaa la koray.
Rudbeckia waa la laalay - nooca dalbashada ugu yar ee ka tagista wuxuu ku kori karaa ilaa 2 m, iyada oo uu is-beddel ku yimaado. Ilaa fasalka gaaban ee diyaargarowga ah waxaa ka mid ah kubadda dahabka, Goldkvelle.
Dhibcaha kubadda dahabka laga bilaabo July ilaa October, waxay u adkeysanayaan barafoobay. Teroraha inflorescence ama laba jibbaaran oo dhalaalaya oo huruud ah. Wuxuu u baahan yahay taageero sababtoo ah koritaanka dheer iyo dhuuban.
Kala duwanaanshaha Goldquelle waa mid aad u la mid ah, laakiin waa gaaban (0.8m), oo u dhexeeysa Agoosto ilaa Sebtembar.
Rudbeckia quruxsan, ayaa sidoo kale loo yaqaan shaydaan. Muddada ubaxyada laga bilaabo Julaay ilaa Sebtembar waxay socotaa 40- 45 maalmood. Kobcin hoose, oo ku habboon labada koox iyo hal mar. Xirashada looma baahna.
Variety Vanibis wuxuu leeyahay caleemo cidhiidhi ah iyo inflorescences-orange-yellow-yellow (9 cm dhexroor).
Noocyada Sullivanta waxay leeyihiin caleemo dhaadheer iyo ubaxyo heer sare ah. Wuxuu u baahan doonaa cusboonaysiinta 3-4 sano.
Rudbeckia timo wuxuu leeyahay ubax badan iyo ubax dheer. Inta badan loo isticmaalo bouquets, sida uu leeyahay caws ubax dheer. Darajooyinka:
Goldstrom - noocyo kala duwan oo cagaar ah oo cagaar ah iyo timo adag oo ku yaal afkoda.
Maine Freude wuxuu leeyahay florescences huruud ah (~ 10 cm dhexroor). Aan ka badnayn 70 cm ee dhererka.
Rudbeckia glossy wuxuu ku koraa 2-2.5 m. Isagu Bloomaa laga bilaabo Julaay ilaa Sebtembar, wuxuu leeyahay caleemo dhalaalaya oo qurux badan iyo ubaxyo waaweyn (12 cm guud).
Heerka sare ee Goldshire (2.5 m), geedo adag oo jajab ah oo leh ubaxyo huruud ah.
Herbstonn waa noocyo kala duwan oo ubaxyo dhaadheer ah oo xoog leh ay si xoogan u xajistaan ​​dhulka.
Xulashada iyo xulashada ciidda
Rudbeckia uma baahna fiiro dheeraad ah, laakiin waxa fiican inaad doorato qaybta qorraxda ee goobta si loo beerto (qayb ahaan meelaha hoos loo dhigo waa la ogol yahay). Xitaa dhoobo dhoobo waxay ku habboon tahay dhirta haddii aad ku darto ciid aad u qoddo, laakiin bacrin ah, carrada la suubin karo waxay noqon kartaa mid ku habboon. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay bacriminta ciidda ka hor beerto. Geedka dhoobada ah ee dhulka lagu aaso iyadoo la adeegsanaayo geedo lagu sameeyey dabayaaqadii May, miraha - dhowr toddobaad kadib. Haddii heerkulka hooseeya uu weli ku sii jiro habeenkii, waa in dhirta la daboolaa ilaa la isticmaalo. Saar qabsashada fogaan ah 30-40 cm ka mid kasta oo kale, ka dib markii laga beerto, waxaad mulch karaa ciidda leh compost.
Dhibaatooyinka sii kordhaya Rudbeckia dilka ah
Kordhinta rudbeckia dilka ah ma keeni doonto dhibaato badan. Laakiin waxaa jira dhowr dabeecadood.
Waraabinta waa inay noqotaa mid joogto ah, gaar ahaan haddii baadiyaha ay ku koraan aalado qorrax leh. Waxay ku dhici doontaa abaar gaaban muddo gaaban, laakiin waraabinta ayaa aad u muhiim ah muddada koritaanka firfircoon.
2 jeer xilli ciyaareed (marxaladda koritaanka iyo ugxansidaha) waxaa loo oggol yahay in ay ku quudiyaan laf-dhiska inta lagu jiro waraabinta. Qaado bacrimiyaha caadiga ah ee dhirta ubaxyada. Duufaan looxiray waa in laga saaraa marxaladda ugu dheer ee ubaxyada iyo ilaalinta muuqaalka qurxinta. Ka hor inta jiilka rudbeckia gooyaa ee xididka.
Waa muhiim! Waxay noqon doontaa ka fiican haddii, ka dib markii waraabiyo, waxaad ka soo saartaa caws iyo dabciyo ciidda, iyo noocyo sare (in ka badan 80 cm) xirnaan doonaa.
Marka 3-5 sano oo idil ah, orebecia waxay u baahan tahay in la beddelo, tan iyo nidaamka xididka si dhakhso ah u koraya oo qashin goobtii. Burburka si fudud ayaa loo qodaa, loo qaybiyaa qaybo badan oo lagu beddelo meelo cusub.
Seeds waxaa la aasaasay September ee ubaxyada dhexe ee xarunta dhexe ee inflorescences. Si aad u soo ururiso abuurka, waxaad u baahan tahay inaad sugto ilaa inflorescences gebi ahaan qalalan marka midhaha ay madow soo noqdaan. Isticmaal maqas si aad uga gooyo tijaabooyinka la soo xulay. Gasho gacno gashi si aad uga hor tagto xayawaanka. Ka dib goosashada, abuurka waa in la qalajiyaa si fiican on waraaq xaashi toddobaadkii, ka dibna lagu kaydiyaa boorsada warqadda. Qalab dheeraad ah looma baahna. Jeexitaanku wuxuu socon doonaa 2-3 sano.
Waa muhiim! Ururinta waa in la sameeyaa maalinta qallalan ee qorraxda. Waxyaallaha lagu ururiyo cimilada qoyan waxay si fudud u jajabin karaan inta lagu jiro qalajinta iyo kaydinta dambe.
Sida loo diyaariyo rudbeckia xilliga jiilaalka
Maadaama Rudbeckia uu ka yimid Waqooyiga Ameerika, waxaa si qurux badan u socda dhulka hoostiisa barafka. Diyaargarowga xilliga qaboobaha waxaa lagu daraa geedka qorraxda iyo ilaalinta ciidda by mulching leh caawinta ee daaha 5-7 cm ee humus. Waxaad sidoo kale dabooli kartaa warshadda leh caleemo iyo caleemo qallalan oo qallalan.
Laba siyaabood oo ah rudbeckia taranta
Rennbeckia Perennial waxaa lagu faafiyaa by abuur ama qaybin baadiyaha.
Sida loo ururiyo abuurka, waxaan hore u sharxnay kor, laakiin waad ka iibsan kartaa iyaga oo aan wax dhibaato ah. Waxaad si toos ah ugu beeri kartaa abuurka dhulka ama kori kartaa geedo. Goobta furan, miraha laguma beerin qoto dheer bartamihii dambe ee June. Qiyaasta - qiyaastii 15 cm. Horeba xilliyada dayrta yar yar ayaa la sameeyaa, iyo sanadka soo socda - baadiyaha yar yar.
In habka seedling, miraha lagu beeray dhexe ee guga ee weelka iyo daboolay dhalooyinka ama filim. Waxaa lagama maarmaan ah in ay ku koraan at + 18 ° S - + 22 ° S, marka caleemaha soo baxaan, heerkulku wuxuu yareeyaa + 16 ° S. Ka dib markii 4 caleemo ayaa u muuqday, geedo lagu riixo dheriyada hoteelka. Si tartiib ah ayaa loo qabtaa hawada furan dhowr saacadood. Gawaadhida dhulka ka dib markaad dhaxeyso.
Tan iyo markii ay adagtahay in la koro orebeckia laga bilaabo abuurka, iyo waqti isku mid ah ma jirto wareejinta sifooyinka noocyada kala duwan ee warshad hooyada, waxaa badanaa la faafiyo by qaybinta rhizomes. Waxaa fiican in la sameeyo nidaamka guga (sida ugu dhakhsaha badan caleemaha bilaabay inuu muuqdo) ama xilliga dayrta (ka dib markii ubax). Si arrintan loo sameeyo, qodo baadiyaha iyo si tartiib ah u kala qaybinta. Mid kasta waa inuu ku jiraa kelyo cusbooneysiin. In bacriminta, dhulka la furay, ka dhigi wanaagsan iyo dhirta qaar ka mid ah baadiyaha rudbeckia.
Ma taqaanaa? Dadka degaanka ugu horreeya ayaa loogu yeeray ubaxan "madow indhaha madow Susanna", iyo dadka yurubiyanku waxay magac bixiyeen "koofiyadda qorraxda". Maanta, rudbeckia timo waa astaanta gobolka Maryland, USA.
Cayayaanka waaweyn ee rudbeckia
Nematodes caleenta, caarada budada ah, cayayaanka iyo cayayaanka cunta cayayaanka waa cayayaanka ugu caansan ee orebecia.
Muuqaalka muuqaalka caleenta cagaarka ah, midabada, jaalaha ah ee caleemaha ayaa muujinaya cudurka nematodes. Ka saar caleemaha waxyeeloobay iyo lumay. Daweeyo dhirta cayayaanka. Ka hortagga waa mid sax ah, ma ahan kuwa waraabinta.
Haddii aad aragto patina dabacsan oo caddaan ah, oo caleentuna waxay noqotey mid jilicsan, ka dibna malaha rudbeckia waxaa lagu dhuftay xayrta maqaarka. Wixii halgan ah, murgacashada kareemka sulfate (40 g halkii 5 l oo biyo ah), iyo sidoo kale xalka kumbofal colloidal (1%) ayaa ku habboon. Sidoo kale bedelka lakabka sare ee carrada.
Marka qallalan, qaababka jaalle-orange-codka on caleemaha, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo la dagaalanka miridh (cudur fungal). Waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo baadiyaha fungicide. Daryeelka iyo daryeelka saxda ah waa ka hortagga. Sidoo kale isticmaal cayayaanka si aad uga hortagto cayayaanka.
Dhirta Tani waa mid u adkaysata cayayaanka iyo, iyada oo tiknoolajiyada beeraha si haboon loo isticmaalo, marar dhif ah ayuu jiranayaa, sidaas awgeed daryeelka saxda ah waa ka hortagga cayayaanka oo idil: waraabinta, dabacsanaanta ciidda, ka saarista inflorescences qalajiyey, bacriminta; iyo sidoo kale gubashada qaybaha dhirta uu cudurku ku dhacay. Way ka fiican tahay in la qodo orebeckia saamaysay iyo beerta ciidda leh xal xooggan oo ah Kansar dhalaanka.
Rudbeckia inta badan waa doorasho weyn oo loogu talagalay beertaada. Sida lagu sharraxay maqaalkan, waa sahlan tahay in la daryeelo iyada, waxaa jira noocyo badan oo loogu talagalay dhadhanka oo dhan, iyada oo marar dhif ah xanuunsado. Buuggan qorraxdu waxa uu dhammaystiri doonaa habayn kasta oo ubax ah, wuxuuna kugu farxi doonaa ilaa uu barafku ku jiro.